मनको मैलो पोख्नै भएन !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
भद्र छविका मेसी किन आवेशमा देखिन्छन् ? कोपा आयोजनामाथि नै प्रश्न उठाएर उनी किन झोक्किए ? र, सबै उनीमाथि किन खनिइरहेका छन् ?
असार २८, २०७६ हिमेश
साथी सधैं ठीक हुन्न, साथी भएकै कारणले मात्र ठीक हुन्छ भन्ने हुन्न,’ डानी एल्भेसले आफ्ना साथी खेलाडी लियोनल मेसीका लागि निकै चतुराइँपूर्वक खर्च गरेका शब्द हुन् यी  । बार्सिलोनाका लागि यी दुई खेलाडीले सँगसँगै बाक्लै सफलता चुमे  ।
अहिले यिनै दुई खेलाडी फरक कित्तामा छन् । ब्राजिली एल्भेस मान्छन्— अर्जेन्टिनी मेसीले आफ्नो देशलाई जुन सम्मान दिनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै दिन सकेनन् । हुन पनि मेसीले दायाँ हेरेनन्, बायाँ हेरेनन् र भनिहाले, ‘कोपा अमेरिका आयोजना नै ब्राजिललाई जिताउन गरिएको हो ।’ उनी यत्तिकैमा रोकिएनन् । भने, ‘दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ भ्रष्ट छ ।’
भर्खरै टुंगिएको कोपा अमेरिकामा तेस्रो स्थानका लागि चिलीविरुद्ध भएको खेलमा मेसीले रातो कार्ड पनि खाए । हंगेरीविरुद्ध सुरुमै डेब्यु गर्दा पनि उनले रातो कार्ड खाएका थिए, लगभग १४ वर्षअगाडि । अहिले उनले आफ्नो खेल जीवनमै दोस्रोपल्ट मात्र रातो कार्ड पाएका हुन् । अधिकांश समय भलाद्मी रहने मेसीले आफूलाई रोक्नै सकेनन् । र, एक प्रकारले तमासा नै गरे ।
विश्व फुटबल मेसी एक जना खेलाडीलाई लिएर यति धेरै विभाजित यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । सबै मान्छन्— उनी आधुनिक विश्व फुटबलका महान् खेलाडी हुन् । अब एकथरी के भन्न थालेका छन् भने, मेसीको व्यवहार त्यो महानतालाई सुहाउने खालको भएन । आफूले जिते सबै ठीक, अरूले जिते सबै बेठीक भन्ने पनि कसरी महान् खेलाडी हुन सक्छन् र ? यो तल्लो दर्जाको काम भयो । अर्कोथरी त्यस्ता पनि छन्, जसलाई लाग्छ— मेसीले जे गरे, ठीक गरे ।
बार्सिलोनामै मेसीका साथी खेलाडी हुन्, आरटुरो भिडाल । अर्जेन्टिनाले चिलीलाई नै हराएको हो, तेस्रो स्थानको खेलमा । तर पनि उनी भन्छन्, ‘जति बेला ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबीच खेल हुने गर्छ, अर्जेन्टिनामाथि प्रायः अन्याय हुने गर्छ ।’ सेमिफाइनलमा ब्राजिलले नै अर्जेन्टिनालाई हराएको हो । भिडाल केसम्म मान्छन् भने मेसीले खासमा रातो कार्डसमेत पाउनुपर्ने थिएन । हो, यो तथ्यमा सबै सहमत छन् । चिलीविरुद्धको खेलमा मेसी दुर्भाग्यशाली नै रहे, रातो कार्ड खाएका कारण । रेफ्रीले कार्ड दिनुपर्ने गरेर झगडा भएकै थिएन ।
मेसी पदक थाप्न नगएको विषयलाई लिएर भने धेरैले असहमति व्यक्त गरेका छन् । मेसी आफ्नो खेलजीवनको अन्त्यतिर पुगिसके । बार्सिलोनाका लागि उनले क्लब फुटबलमा के मात्र जितेनन् ? सबै जिते । तर यस्तै सफलता भने उनले
आफ्नो देश अर्जेन्टिनाका लागि पाउन सकेनन् । अझ भनौं, बार्सिलोनाका लागि जितेजस्तो मेसीले आफ्नो देशका लागि केही पनि गर्न सकेनन् । यस्तो भनाइ कतिपल्ट दोहराएर भनिएको छ भने यो सुनेर मेसीको पनि कान पाकेको हुनुपर्छ ।
मेसीकै भाषामा पनि यो वास्तवमै पीडादायी छ । मेसीलाई अर्जेन्टिनी जर्सीमा खेल्दा पनि अचेल यस्तो लाग्दो हो, यदि कसैले उनलाई एकोहोरिएर हेर्छ भने पक्कै त्यो मान्छेको मनमा हुनुपर्छ— यो खेलाडीले अहिलेसम्म आफ्नो देशका लागि केही जित्न सकेको छैन ! आखिरमा यस्तै यस्तै, अर्जेन्टिनाका लागि खेल्नै नसकेको, जित्नै नसकेको सुन्दासुन्दा निराश भएर मेसी आफ्नो स्वभावविपरीत बोल्ने भएका पो हुन् कि ? हारमा कसैलाई आफ्नोभन्दा अरूको दोष देख्ने बानी हुन्छ, कतै मेसीलाई पनि यस्तै रोग लागेको हो कि ?
यसैलाई पुष्टि गर्न अब पुराना इतिहासका पाना पल्टाउने काम पनि सुरु भएको छ । यसका लागि सबभन्दा बढी बार्सिलोनाकै उदाहरण पेस गर्न थालिएको छ ।
बार्सिलोना खेलेका केही महत्त्वपूर्ण खेलमा रेफ्रीको निर्णय विवादास्पद ढंगले उसको पक्षमा रहेका छन् । अझ भनौं, रेफ्रीको केही निर्णयले बार्सिलोनालाई असाध्यै फाइदा गरेका पनि छन् । सन् २००९ मा बार्सिलोना र चेल्सीबीचको खेलमा यस्तै भएको थियो । त्यति बेला सेमिफाइनल दोस्रो लेगमा चेल्सीले पाउनै पर्ने केही पेनाल्टी पाएको थिएन ।
त्यति बेला डिडिएर ड्रोग्बाले मुख छाडेरै रेफ्रीलाई गाली गरे । पछि बार्सिलोनाले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई हराएर उपाधि नै जित्यो । सन् २०११ को च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलकै पहिलो लेगमा बार्सिलोनाले रियल म्याड्रिडलाई पराजित गर्दा पनि निर्णय एकपक्षीयजस्तै थियो । त्यति बेला रियलका प्रशिक्षक थिए, जोसे मोउरिन्हो । बार्सिलोनाको जिम्मेवारी भने पेप ग्वार्डिओलाको काँधमा थियो । त्यति बेला मोउरिन्होले भनेका थिए, ‘एक दिन मलाई बार्सिलोनाले झेल्ली नगरेर जितेको हेर्ने इच्छा छ ।’
त्यस सिजन पनि बार्सिलोनाले म्यानचेस्टरलाई नै फाइनलमा हराएर उपाधि जित्यो । अनि सन् २०१७ मा बार्सिलोना र पीएसजीबीच च्याम्पिपयन्स लिगका लागि भएको खेलमा पनि यस्तै भएको थियो । त्यसमा पीएसजीले पहिलो लेग ४–० जितेको थियो । भन्न पर्दैन क्लब मख्ख परेको थियो, यो जितमा । तर दोस्रो लेग उल्टै ६–१ ले पराजित भयो र जिल्ल पर्‍यो । नु क्याम्पमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले दुई अवसरमा विवादास्पद पेनाल्टी पायो, तर पीएसजीले पाउनैपर्ने पेनाल्टी पाएन ।
ती दिन कि त ड्रोग्बा बोले, कि मोउरिन्हो बोले । तर कसैले पनि बार्सिलोनालाई नै जिताउन प्रतियोगिता भएको थियो भने न त कसैले कसैमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाए । थिएगोले ब्राजिलका लागि पनि खेले, पीएसजीका लागि पनि खेले । भर्खरै उनले पनि मेसीको आलोचना गर्न छाडेनन् । भने, ‘खेलमा रेफ्रीको निर्णय यस्तै हुन्छ, कहिले फाइदा हुन्छ, कहिले घाटा । फाइदा हुँदा केही नभन्ने, घाटा हुँदा बोल्ने ठीक भएन । मेसीलाई यही समस्या छ र यो द्वैधचरित्रको राम्रो उहाहरण पनि हो ।’
हो, त्यतिबेला पटक्कै केही नबोल्ने एक जना थिए र ती थिए— मेसी । अब भने धेरैले के मान्न थालेका छन् भने त्यति बेला नबोल्नु र अहिले बोल्नुको एउटै कारण हो, निराशा । त्यो पनि रिस मिसिएको । आखिरमा ठूलो उपाधिको निकै नजिक पुगेर पनि जित्न नसकेपछि चोट त हुन्छ नै । खालि त्यो चोटबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने न हो । कोपा अमेरिकाका दुई फाइनल र विश्वकपको एक फाइनलमा हारेपछि मेसीले आफैंलाई सम्हाल्न नसकेको हुनुपर्छ ।
त्यसैले अर्जेन्टिनाका लागि केही ठूलो उपाधि जित्न नसकेपछि मेसी केही न केही गरिहाल्छन् । अब त केसम्म भन्न सुरु भएको छ भने सन् २००५ मा हंगेरीविरुद्ध मेसीले के रातो कार्ड पाए, त्यति बेलादेखि टिम र उनलाई अलच्छिन लाग्न थालेको हो । सन् २०१६ को कोपा अमेरिका फाइनलमा चिलीसँग अर्जेन्टिना पराजित भएपछि मेसीले तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट संन्यास लिएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यो भनेको अबदेखि अर्जेन्टिनाको जर्सीमा खेल्दिन भनेको त थियो । त्यो धेरैलाई स्तब्ध बनाउने निर्णय थियो । धेरैले पत्याएनन् पनि । नभन्दै उनले पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिए । फेरि अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएर मैदानमा देखापरे । धेरैपल्ट लेखिएको छ र धेरैपल्ट भनिएको छ— खासमा मेसी अर्जेन्टिनी नै होइनन्, बरु हुन त क्याटलान । सानै उमेरमा उनले अर्जेन्टिना छाडे, स्पेनको बाटो लिए । बार्सिलोनाले सुरुमै उनलाई सहयोग नगरेको भए, मेसी खेलाडी नै नरहने सम्भावना पनि थियो । उनले आफ्नो पूरा खेल जीवन बार्सिलोनकै खेलेका छन् । बार्सिलोनासँग त्यस्तो टिम छ, जसले मेसीको खेललाई पूर्णतः सहयोग गर्छ । त्यसैले मेसी बार्सिलोनाका लागि असाध्यै सफल भए ।
यही स्थिति मेसीका लागि अर्जेन्टिनी टिममा रहेन । त्यसैले बारम्बार डिएगो म्याराडोना र मेसीका तुलना गरेर चर्चा पनि हुन्छ । खासमा म्याराडोना खेल्दाको अर्जेन्टिना धेरै राम्रो थियो । मेसीले त्यस्तै अर्जेन्टिनी टिम आफ्नो खेल जीवनमै पाएनन् । म्याराडोनाले आफ्नो समयमा एक्लै खेलेर मात्र जितेका थिएनन् । उनलाई बलियो टिमको साथ थियो । म्याराडोनाका लागि अधिकांश निर्णायक खेलमा जोर्गे बुराचागाको साथ हुन्थ्यो ।
सन् १९८६ को विश्वकप फाइनलमै सुरुमा अर्जेन्टिनाले दुई गोलको अग्रता लिएको थियो, पछि तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले दुई गोल फर्कायो । त्यतिबेला खेलको नतिजाजस्तै पनि हुन सक्थ्यो । म्याराडोनाको पासमा बुराचागाले निर्णायक गोल गरे र विश्वकप जित्यो, अर्जेन्टिनाले । त्यही विश्वकपले म्याराडोनालाई सधैंका लागि महान् बनाइदियो । तर, मेसीले बुराचागा पाएनन् । पाए त– गोन्जालो हिगुइन । मेसीको पासमा हिगुइन खास–खास अवसरमा गोल गर्न चुकेका छन् ।
त्यसैले मेसीको अर्जेन्टिना कहिले पनि ठूलो अवसरमा विजेता रहेन र म्याराडोनाजस्तो मेसी महान् हुन सकेनन् । उनको तुलना म्याराडोनासँग होइन, पोर्चुगाली क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग पनि हुन्छ । यी त झन् समकालीन खेलाडी परे । पछिल्लो दुई वर्षमा रोनाल्डोले आफ्नो देशका लागि दुई ठूलो उपाधि जितिसकेका छन् । त्यसमा प्रमुख त युरो नै भयो । यस्तोमा रोनाल्डाले क्लबका लागि जिते, आफ्नो देशका लागि पनि जिते, मेसीले भने यस्तो गर्नै सकेका छैनन् । त्यसमाथि के पनि सबैले मान्न थालेका छन् भने रोनाल्डो एक्लै आफ्नै खेलले टिमलाई जिताउन सक्ने खेलाडी हुन् । रोनाल्डोको के गर्छन्, थाहा छैन, तर उनले टिमलाई जिताउने काम भने गर्छन् । मेसी यस्ता छैनन् । उनी टिममा बढी भर पर्ने खेलाडी हुन् । साथी खेलाडी राम्रा भए, उनी पनि राम्रा, नत्र मेसीको खेलबाट रङ उड्ने गर्छ । यसपल्टको कोपामा पनि कहाँ मेसी र अर्जेन्टिनाको प्रदर्शन राम्रो रह्यो र ? बल्ल तल्ल नाकले टेकेर सेमिफाइनल पुगेको त हो, जहाँ ब्राजिलको हातबाट चित खाइहाल्यो र पर्‍यो, उत्तानो ।
अब यो सबै चर्चाबीच दुई तथ्य मात्र बाँकी छ । पहिलो, दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले उनलाई कति सजाय तोक्ने हो ? धेरैको अनुमान छ– यो सानोतिनो हुने छैन । मेसीले लगाएको भ्रष्ट भएको आरोप भुइँमा खस्न नपाउँदै महासंघले पनि प्रतिक्रिया दिन हतारो देखाइहाल्यो । महासंघ खासमा मान्छे होइन तर उसलाई पनि साह्रै चित्त दुखेको छ, मान्छेलाई जस्तै । त्यसैले हुन सक्छ, मेसी लामै समय अर्जेन्टिनी जर्सिमा नदेखिन सक्छन् ।
अब बाँकी रह्यो, उनको बोलीको । आवेशमा आएर उनले जे जति बोले, के ती सबै मेसीले फिर्ता लिनेछन् त ? यो कसरीभन्दा उनले जसरी आफ्नो संन्यासको निर्णय फिर्ता लिएका थिए । बेर छैन, यस्तो हुन सक्छ । साँच्चै मेसीले यसपल्ट नचिताएको तमासा गरेर देखाए । यो तामासाकै काराण भविष्यमा भनिनेछ— मेसी म्याराडोना जत्तिका खेलाडी होइनन् । र, अर्को पनि प्रश्न गरिनेछ— के मेसी रोनाल्डो जत्तिको पनि थिएनन् त ? थिए भने उनले किन अर्जेन्टिनाका लागि केही जिताउन सकेनन् ?
यसका उत्तर धेरै हुनेछन् । कतिले माथि भनिएजस्तै उनीसँग त्यो टिम थिएन भन्नेछन् । अलि बढी कठोर हुनेहरूले मेसीमै त्यो क्षमता थिएन भन्ने छन् !
असार २८, २०७६ यज्ञश
भनिन्छ, सबभन्दा ठूलो स्वर मौनताको हुन्छ  । एकदमै गहिरो चोट लाग्दा मानिसको मनबाट कुनै आवाज निस्किँदैन  ।
एकदमै ठूलो खुसी मिल्दा पनि मानिस मौन रहन्छ । मौन केवल उदासीको मात्र भाषा होइन । सिनेमाको भाषामा त झन् मौन (साइलेन्स) को निकै ठूलो महत्त्व छ । ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको झ्याङ झ्याङले भरिएका बलिउड र नेपाली फिल्मको कुरा अलग, नत्र संसारभरि नै उत्कृष्ट निर्देशकहरूले सिनेमामा मौनताको कलात्मक उपयोग गरेका छन् । पात्रको मनोदशा दर्साउन मात्र होइन, दर्शकलाई आफ्नो दुनियाँमा तान्नका लागि पनि निर्देशकहरूले मौनतालाई एउटा ‘टुल’ का रूपमा प्रयोग गर्छन् । कथाको उतारचढाव र अभिव्यक्तिमा पनि मौनताको प्रयोग गरिन्छ ।
एकनास चलिरहेको हावा, एउटै वेगमा बगिरहेको नदी वा कुनै चौतारोमा सुस्ताइरहेका वृद्ध आँखाहरू ! यी सबैले एउटा सघन विस्मय तथा मौनताको भाषा बोल्छन् । एउटा परिवार यही वेगमा चलिरहेको छ । वृद्ध हजुरआमा, अधेड बन्दै गरेको पिता, जवान आमा र सानो छोरा । सहरको करिब करिब परित्यक्त गल्लीमा सानो झुपडी टाइपको घर छ । साँघुरो कोठामा परिवार कोचिएर बसेको छ । गरिबी यस्तो चीज हो, जो धेरैजसो आवरणबाटै प्रकट हुन्छ । यो परिवार पनि आवरणदेखि नै गरिब छ । फिल्मको सुरुमै एउटा दृश्य छ । सहरको भव्य सुपरस्टोरमा पिता–पुत्र सामान किन्न गएका छन् । पिताले पसलवालालाई केहीमा अल्झाउँछ, पुत्रले चाहिने जति सामान झोलामा भरिसक्छ । सीसीटीभीजस्ता अवरोधलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा बाबुछोरा पारंगत छन् । दृश्यको अन्त्यसम्ममा थाहा भइसक्छ कि यिनको मुख्य काम पसलबाट सामान चोरी गर्नु हो ।
मानिसको मन र त्यसभित्र लुकेका कथाहरूको अनुमान आवरणबाटै लगाउन सकिँदैन । यो त्यस्तै कथा हो । ‘सपलिफ्टर्स’ मनको भित्रसम्म पस्ने कथा हो । अति सामान्य परिवारको सामान्य कथाजस्तो लाग्ने कथाका पत्रहरू समुद्रका अनगिन्ती छालजसरी एक–एक गर्दै खुल्दै जान्छन् । सानो छाललाई पछ्याएर झन् ठूलो छाल आएजस्तो पात्रका कथाहरू आउँदै गर्छन् । र, दर्शकलाई रुझाउँछन् ।
महानगरको चकाचौंधका बीच बत्तीमुनिको अँध्यारोजसरी, सहरको कोल्टोमा बस्ने मानिसहरूको कथा हो– सपलिफ्टर्स । बन्दाबन्दै भत्किएका र भत्किँदा भत्किँदै बनेका परिवारको गाथा हो ‘सपलिफ्टर्स’ । संरचनाको हिसाबले यो कथ्यलाई जोड्दै जाने नभई, टुक्राउँदै जाने कथा हो । सामान्ययता कथाहरू चुम्बकले फलामका टुक्राहरू तान्दै, जोड्दै लगेर एकै ठाउँमा थुप््य्राउने शैलीका हुन्छन् । पात्र र तिनका छिरलिएका भावनाहरूलाई समेट्दै एउटा पोकोमा गाँठो पारेपछि फिल्म सकिन्छन् । ‘सपलिफ्टर्स’ भने यसको उल्टो छ । सुरुमा ठोस देखिएका सम्बन्ध र भावनाहरूलाई फिल्मले आगोले फलामलाई जसरी पगाल्छ लैजान्छ । र, तरल अवस्थामा पुर्‍याएर छोडिदिन्छ ।
एउटा परिवारको कथाका रूपमा सुरु हुने यसले समाजका धेरै पत्रहरू खोल्दै जान्छ । यसै क्रममा जब आफ्नै परिवारबाट दुर्व्यवहार भोगेकी ५–६ वर्षकी बालिकाको यो संसारमा प्रवेश हुन्छ, फिल्म पूरै मोडिन्छ । नयाँ भेटिएकी ‘बहिनी’लाई पनि दाइले सामान चोरीको प्रशिक्षण दिन थालेपछि के हुन्छ ? यो बालिका खासमा को हो ? यसमाथि दुर्व्यवाहार किन भयो ? यो बालिकाको लहरोले समाजका के–के पहरो घर्काउँछ ? फिल्मका मुख्य घटनावली यसकै वरिपरि घुमेको छ ।
‘सपलिफ्टर्स’ का निर्देशक हुन् हिरोकाजु कोरेइदा । कुनै एक लामो यात्रामा मैले हवाइजहाजमा यिनको फिल्म हेरेको थिएँ– ‘लाइक फादर, लाइक सन ।’ यो पनि परिवारकै कथा । फिल्ममा दुई बाबु छन्, दुई छोरा । एउटा निकै धनी, सम्पन्न बाबु र ऊजस्तै छोरा । अर्को गरिब र मस्तमौला बाबु र उसको छोरा । छोरा ८–१० वर्षको भएपछि अस्पतालको गल्तीले गर्दा जन्मिँदै छोरा साटिएको थाहा भयो भने यी दुई परिवारमा कति रेक्टरको भूकम्प आउला ? ‘लाइक फादर लाइक सन’ त्यसको कथा थियो । आधुनिक समयका मानिसहरूको सम्बन्धको नाडी यो फिल्मले छामेको थियो ।
यसमा त्योभन्दा पनि जटिल सम्बन्धका पत्र छन् । पितालाई प्रश्न गरिन्छ— तिमीले छोरालाई किन चोर्न सिकायौ ? तब उसले उत्तर दिन्छ, ‘उसलाई सिकाउन मैले अरू केही जानेकै थिइनँ ।’ यो एउटा बाबुको इमानदारी हो कि बेइमानीको पराकाष्ठा ? के एउटा बाबुले आफ्ना सन्तान प्रयोग गरेर चोरीको धन्दा चलाउन सक्छ/मिल्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ कुरेइदा आफैं दिँदैनन् । दर्शकका लागि छोडिदिन्छन् । यो फिल्मको सबभन्दा ठूलो सुन्दरता नै यसले सबै प्रश्नको जवाफ दिँदैन । फिल्मको काम उत्तरहरू घोकाउनु होइन, दर्शकलाई प्रश्न गर्ने लत लगाउनु हो । चाहे ती प्रश्न सरकार र व्यवस्थालाई गरिने हुन् या समाजको बुद्धि विवेक र आफ्नै चेतनालाई ।
‘सपलिफ्टर्स’ गत वर्ष संसारकै सबभन्दा प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट फिल्मको पुरस्कार जित्ने फिल्म हो । कानले नेटफिल्क्सका फिल्म देखाउन अस्वीकार गरेका कारण मेक्सिकन अल्फान्सों कुरोंको ‘रोमा’ सँग यसको प्रतिस्पर्धा टरेको थियो । ‘रोमा’ अर्को ठूलो फेस्टिभल भेनिसमा प्रतिस्पर्धामा गयो । र, त्यहाँ उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड जित्यो । कानमा ‘सपलिफ्टर्स’ ले पाम’डिअर हात पार्‍यो । तर, यो प्रतिस्पर्धा ओस्करमा भइछाड्यो । दुवै फिल्म आ–आफ्ना देशबाट विदेशी भाषाको प्रतिस्पर्धामा छनोट भए । अन्तिम ५ मा यिनै दुईको प्रतिस्पर्धा थियो, जसमा ‘सपलिफ्टर्स’ लाई ‘रोमा’ ले उछिन्यो । एक हिसाबले हेर्ने हो भने यी दुवै फिल्म अवसादका कथा हुन् । दुइटैमा गहिरो उदासी छ । दुवैले मनलाई चिसो बनाउँछन् । तपाईंलाई सबभन्दा राम्रो काम गरेको छु भन्ठानेर सबैभन्दा गएगुज्रेको काम गरिरहेको रहेछु भन्ने बोध भयो भने कस्तो होला ? कुरेइदा दर्शकलाई त्यस्तो भावसँग साक्षात्कार गराइदिन्छन् ।
नेपालका फिल्महलमा यस्ता फिल्म विरलै आउँछन् । तर, खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं, राम्रो फिल्म हेर्न खोज्ने दर्शकलाई पनि हलले छेक्दैन । इन्टरनेटको संजालमा जेलिएको यो दुनियाँमा थुप्रै त्यस्ता छिद्र छन्, जहाँबाट घामको प्रकाश धर्तीमा आइपुगे जसरी राम्रा फिल्महरू हाम्रा कम्प्युटर, ट्याब र मोबाइलमा आइपुग्छन् । आगे तपाईंको मर्जी !